iPhone 6s Uyezve - iPhone Nhau | IPhone nhau
El IPhone 6s Plus anosvika kuzova chizvarwa chechipiri cheApple phablet. Yakashongedzerwa neIOS 9, Apple inosanganisa iyo iPhone 6s Plus seyakakwana sarudzo kune avo vanoda kunakidzwa neIOS 9 mune imwe. 5,5 inch screen uye Yakazara HD resolution, maficha anoramba akasimba achienzaniswa neakautangira. Kana isu hatikwanise kukanganwa nezvazvo 3D Touch, iyo tekinoroji iyo inobvumidza kuona akasiyana maseru ekumanikidza pamusoro pechiso, chimwe chinhu chichava chakanyatsoshandiswa neIOS 9 pane iyo iPhone 6s Plus.
Kunyangwe dhizaini isina kuchinja, iyo iPhone 6s Plus inouya pamwe nekuvandudzwa mune yayo Hardware. Kutanga, iyo nyowani Apple A9 processor inovimbisa simba rakawanda nekusimba kwesimba kuita kuti iyo iPhone 6s Plus bhatiri igare kwenguva refu. Kutaura kunofanirwa kuitwawo neiyo 2 GB RAM ndangariro izvo zvinokutendera iwe kuti uve nemaapplication akawanda anomhanya kumashure.
La iPhone 6s yekumashure kamera Kuwedzera kunowana kujekerwa nekuda kweiyo 12 megapixel sensor uye inovandudza ruzivo pasi pechero mamiriro emwenje, ichiita kuti mifananidzo yako itaridzike zvirinani kupfuura nakare kose.
IPhone 6s Plus mitengo
Iyo iPhone 6s Plus ichave ichiwanikwa kubva munaGunyana negoridhe, nzvimbo pfumbu, sirivheri kana pinki inosanganiswa nechena pamberi. Iyo yekupedzisira ichave ichiwanikwa mune masimba e16 GB, 64 GB uye 128 GB pamutengo we849 euros, 959 euros uye 1.069 euros zvichiteerana.
Dzese nhau nezve iyo iPhone 6s Plus
Kana iwe uine iPhone 6s kana 6s Plus iyo isingavhure, tarisa Apple nyowani yekutsiva chirongwa
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 3 makore .
Apple ndeimwe yemakambani anonyanya kutarisira vatengi vayo uye ndinotaura izvi kubva pane zvakaitika kwandiri ne ...
Apple inotanga mushandirapamwe wekusimudzira iyo iPhone 6s "Yakagadzirwa muIndia"
kubudikidza Karim Hmeidan inoita 3 makore .
Isu tinotaura zvakawanda nezvekufamba kwevakomana kubva kuCupertino pavanofunga kuvhura chigadzirwa pamusika, mharidzo ...
Apple inogona kutanga kutsiva iPhone 6 Plus ine iPhone 6s Plus
kubudikidza Karim Hmeidan inoita 4 makore .
Izvo zvinetso nemabhatiri eiyo iPhone zvichiri mukuwonekera, mamwe matambudziko ayo Apple ane ...
Iyo iPhone SE, 6s uye 6s Plus ikozvino yakachipa uye iine huwandu hwakawanda
kubudikidza Ignatius Room inoita 6 makore .
Nguva dzese kambani painoburitsa itsva iPhone modhi, mitengo inokwirawo ichienzaniswa ne ...
Misiyano mikuru pakati pe iPhone 6s uye iPhone 7
Anenge maawa makumi maviri nemana apfuura kubva paratidziro yepamutemo yeiyo nyowani iPhone 24 uye zvakadaro havazi vazhinji vashandisi ...
Iyo iPhone 6s yaive yakatengwa kwazvo smartphone mukota yechipiri ya2016
kubudikidza Karim Hmeidan inoita 6 makore .
Ehe, isu tiri kure nemaawa kubva pakutanga kweKeynote mharidzo yeiyo iPhone 7, mharidzo yekuti ...
Nhema iPhone 7 pfungwa, naMartin Hajek
kubudikidza Paul Aparicio inoita 6 makore .
Kunyangwe Apple isina kuiziva pachena, iwo eCupertino akamira kupa iyo nhema nhema iPhone mushure me ...
Amai vanoponesa hupenyu hwemwanasikana wavo nekushandisa Siri kufonera ER vachiita CPR
Kubva kuvhurwa kweiyo nyowani iPhone 6s uye 6s Plus, Apple iri kutarisa kusimudzira hunhu hukuru uye ...
Apple inodhinda mavhidhiyo matsva masere emushandirapamwe we "Shot on iPhone"
Apple yakaunza mafoni ayo maviri ekupedzisira, iyo iPhone 6s uye iyo iPhone 6s Plus, munaGunyana wegore rapfuura. Wakatotanga…
Idzi ndidzo, kwandiri, gumi dzakanakisa 10D Kubata manenji
MunaGunyana 2014, Apple yakaunza iyo Force Kubata, mhando nyowani yescreen iyo yaisiyanisa dzakasiyana siyana, kuti ...
Galaxy S7 inodonha kukunda iPhone 6s mumabhenji
Izvo zvine musoro, kunyangwe vamwe vevaverengi vedu vasingazvione saizvozvo, kuti mumavhiki apfuura takataura zvakanyanya nezve ...